Mid Ka mida Jilayaashii Filimkii lagu xumeeyay Sharafta Nabigeena oo la jah-wareersan fariimo hanjabaad ah | Shabakada Alshahid
Added by Webmaster on September 27, 2012.
Saved under Faaqidaad, Islaamka, Sawirada, Warar, Warbixin
Nicola Baseli oo ah ninkii Filimka Nabiga lagu xumeeyay sameeyay iyo Sydeny Jersey oo Jilayaasha ka mid ahayd/ Sawir hore
USA (Alshahid)- Haweeney u dhalatay dalka Mareykanka kana mid ahayd Jilayaashii Filimkii lagu xumeeyay Sharafta Nabigeena Muxamed (NNKH) ee dhawaan la sameeyay ayaa waxay sheegtay inay fariimo is-daba joog oo xambaarsan hanjabaad ay la kulmeysay tan iyo markii Filimkaas uu ku faafay Caalamka.
Mrs. Sydney Jersiya ayaa ku adkeystay inay Maxkamad lasoo koreyso ninkii lahaa Fikrada iyo diyaarinta Filimkan oo lagu magacaabo Nicola Basili kaasi oo ay sheegtay inuu marin-habaabin ku sameeyay Jilayaashii Filimka oo ay iyadu ku jirtay.
Waxay tilmaamtay haweeneydu in markii hore Filimka magaciisu uu ahaa -Dagaalyahanadii Lama-dagaanka, isla markaana ay iyadu qaadatay Lacag dhan 500 oo dollar si ay uga qayb qaadato Jilitaanka FIlimka.
Laakin waxay sheegtay in ka dib markii la duubay Filimka lagu dhaqaaqay in wax laga badalo oo markaa ka dibna laga dhigay mid dhaleeceynaya Islaamka iyo Rasuulka Muxamed (NNKH), dhaleeceyntaasuna kuma aysan jirin qoraalkii Filimka ee hore.
Mrs. Jarsiya ayaa xustay inay iska cafisay ninkii Alifay Filimka maadaama bay tiri uu Ilahay na farayo in leys cafiyo. Laakin waxaan ku adkeysanayaa bay tiri inaan Maxkamad lasoo koro.
Iyadoo ka hadlaysay Barnaamij lagu magacaabo The View oo ka baxa Shabakada Wararka Ameerikaanka ah ee ABC News ayaa waxay hadalkeeda sii raacisay inay la xiriirtay Basili ka dib marka ay soo bexeen Wararka sheegayo inay Dibad-baxyo caraysan oo Filimka ka dhashay ay bilowdeen, waxaana waydiiyay bay tiri sababta ay taasi u dhacday.
Hase yeeshee iyadoo sii hadlaysa ayaa waxay xustay in Alifaaga Filimka ee Mr. Baseli uu ugu jawaabay inay iyadu xor u tahay inay la hadasho dadweynaha oo ay u sheegto inaanay wax lug ah ku lahayn waxaas dhacay.
“Iga gaarsii dadka banaanbaxaya inaan aniga ka carooday dilka ay dadka Muslimiinta ah ee Mayalka adagi ay kula kacayaan rayidka. Aniguna waxaan wataa Jinziyadda dalka Israil” sidaas ayuu igu yiri bay tiri haweeneydani ninkii Filimka qoray ee Mr. Nicola Baseli.
Qareenka Haweeneydan oo isagana lagu magacaabo Cris Armanita ayaa isla barnaamijka Shabakadu ay baahisay wuxuu ka sheegay inay ka go’antahay Maxkamadaynta Baseli maxaa yeelay wuxuu hadal aanay iyadu oran u tiiriyay Mrs. Jersiya oo uu isagu Qareenkeeda yahay.
Haweeneyda Jilaaga ka ahayd Filimkan ayaa waxay tibaaxday inay xiriir la samaysay dad badan oo Muslimiin ah si ay ugu faah-faahiso aragtideeda iyo inaanay iyadu haba yaraatee wax fikrad ah markii hore ka heysan inuu Filimku xambaarsanyahay weerar iyo tacadi ka dhan ah Diin kale.
Qareenkeeda oo hadalkiisa sii watana wuxuu sheegay inay Mrs. Jersiya gudbisay Dacwad Garsoor oo ay ku dalbanayso in Cajalada Filimka laga saaro Shabakada Macluumaadka Caalamiga ah ee Internetka maadaama ay xambaarsantahay waxyaabo iyada Xuquuqdeeda dhibaato u keenaya. Wuxuuna Qareenku muujiyay sida uu u rajaynayo in Dacwadda ka dhanka ah Baseli ay guuleysato.